Custom Sticker, ngokwezifiso Decal, ngokwezifiso Emblem, ngokwezifiso Metal Sticker - Ever Greater
Sithole athuthukile 1000 sika designs.We iqembu abaklami belindele ukuzwa requirements.Just yakho usazise okudingayo, lokho ukuthi zisetshenziselwa, futhi lapho uludinga, futhi sizongena ilungelo ke!
Ukuze ukuthuthukisa sticker ephelele Isitika bethu bamahhotela uzosebenzisana eduze nethimba lakho ukuqinisekisa ukuthi umklamo olufana ekupheleni result.With iminyaka engaphezu kwengu-20 nakho sizokwenza lokhu kahle futhi effectively.You bangathembela kithi!
Ethula project ngathi akulona nje ukukuthumela umgomo shipment.Our ukuqinisekisa yi yakho Fina Kwenzeka njengoba nje wena wacabanga it.We athembisa ukuletha imiphumela emihle, okusheshayo, futhi enokwethenjelwa ngesikhathi esigabeni ngasinye iphrojekthi.
Ngezinye wake okukhulu, izitika kukhona inkanuko yethu.
abathandekayo Big, abancane, labo ezihlekisayo, nezimbi kangakanani, Senza ke all.Need into eyayingakaze enziwe ngaphambi? esandleni us.As umkhakha Veterans abanolwazi engaphezu kwengu-25, lapho Cishe akukho stickers singakakwenzi .
Sinikeza anhlobonhlobo izinto nobuchwepheshe esikhethekile ukukhetha from.Just uxhumane Isitika yethu buhle futhi bayohlala maksure uthola stickers ephelele okudingayo, futhi ufuna.
3D-chrome ilebula & Nickel Ilebula
Ibheji & Emblem
Dome Isitika PU noma Epoxy isitikha
Medal, Metal esheyininikhiye & Metal izikebhe
Project yethu kwakamuva
Ngiye ngasebenza nabanye Miranda Wang kusukela 2009, uye wabonisa kaningi ubuqotho bakhe bangempela futhi sinesifiso esiqotho ukuba bangikhonze esikhundleni ikhasimende abaqotho futhi ukuletha imikhiqizo ngesikhathi futhi isabelomali. Ngingamchazela ngenhliziyo yonke kukukhuthaze ukuba uvumele Miranda ithuba lokubonisa kuwe yena nethimba lakhe mathupha indlela ungase ukwazi ukusiza lomthombo izixazululo buisness yakho. Ngingajabula kakhulu ukuxhumana nawe mathupha ukuqinisekisa izincomo zami
Quality neze ingozi. Kuyinto umphumela umzamo ezihlakaniphile. Mina ngikwazile Miranda isikhathi esithile manje futhi wakhe kanye nethimba lakhe ngesikhathi Ever Greater ingabonisa konke Ngibheka yokukhiqiza Chinese ekwaziyo. Ngiyaziqhenya ngokuthi "abalingani bami omethembayo"
Ngiye ngenza nomsebenzi ophathelene nezakhi Miranda kumaphrojekthi ahlukahlukene eminyakeni embalwa edlule ngingasho ngobuqotho ukuthi akuyona nje kuhle kakhulu ukusebenzisana naye kodwa omunye kakhulu luvulwe futhi ephumelelayo ochwepheshe Sengiyazi yonkana. Kungakhathaliseki ukuthi ukusebenza naye ngqo iqembu noma ngabe usebenza naye kulesi sikhundla nokuhlonza / ukuthenga, uyabuthola izinto futhi ibonakala njalo beveza indlela innovative ukuze udlule inkinga. Ngincoma ukusebenza Miranda futhi kungaqinisekisa ekubhekaneni wakhe noma inkampani yakhe iyoba nakho bushelelezi futhi awahluphi.